Mila Fantatry ny Ankizy hoe Nahoana no Sarotra ny Manao ny Tsara
Nahoana no Sarotra ny Manao ny Tsara?
IZA no faly rehefa nanao zava-dratsy i Saoly?... Satana Devoly. Faly koa anefa ireo mpitondra fivavahana jiosy. Nanomboka nankahala an’i Saoly àry izy ireo, rehefa lasa mpianatr’ilay Mpampianatra Lehibe izy, ary nantsoina hoe Paoly. Azonao amin’izay ve hoe nahoana no sarotra amin’ny mpianatr’i Jesosy ny manao ny tsara?...
Inona no fahoriana nanjo an’i Paoly rehefa nanao ny tsara izy?
Nasain’i Ananiasy mpisoronabe nasiana totohondry i Paoly, indray andro. Nataony mihitsy aza izay hanagadrana an’i Paoly. Nijaly be i Paoly rehefa lasa mpianatr’i Jesosy. Nisy olon-dratsy, ohatra, nikapoka azy ary nitady hamono azy tamin’ny vato be.​—Asan’ny Apostoly 23:1, 2; 2 Korintianina 11:24, 25.
Maro no hampirisika antsika hanao zavatra tsy mahafaly an’Andriamanitra. Izao àry ny fanontaniana mipetraka: Tena tia ny tsara ve ianao? Tena tia ny tsara ve ianao ka hanao izany, na dia mankahala anao noho izany aza ny olona? Mila herim-po ny fanaovana ny tsara, sa ahoana?...
Mety ho gaga ianao ka hieritreritra hoe: ‘Fa nahoana no mankahala antsika ny olona nefa manao ny tsara isika? Tsy tokony ho faly ve izy?’ Izany no tokony ho izy. Matetika no faly tamin’i Jesosy ny olona satria nanao zavatra tsara izy. Nitangorona teo am-baravaran’ny trano nisy an’i Jesosy ny mponina rehetra tao amin’ny tanàna iray, indray andro, satria nanasitrana ny marary i Jesosy.​—Marka 1:33.
Tsy tian’ny olona anefa indraindray ny zavatra nampianarin’i Jesosy. Zavatra marina foana no nampianariny, nefa nisy nankahala azy satria nilaza ny marina izy. Izany no nitranga indray mandeha tany Nazareta, tanàna nahabe an’i Jesosy. Niditra tao amin’ny toeram-pivoriany, nantsoina hoe synagoga, ny Jiosy mba hivavaka tamin’Andriamanitra.
Lahateny tena tsara, niorina tamin’ny Soratra Masina, no nataon’i Jesosy tao. Tian’ny olona ilay izy tamin’ny voalohany. Gaga izy ireo satria nahafinaritra ny teny naloaky ny vavany. Saika tsy nino izy ireo hoe ilay ankizilahy nihalehibe tao an-tanànany io.
Nilaza zavatra hafa anefa i Jesosy avy eo. Nolazainy fa nisy fotoana nanomezan’Andriamanitra fahasoavana ho an’ny tsy Jiosy. Tezitra ireo tao amin’ilay synagoga, rehefa nahare izany. Inona no antony, raha fantatrao?... Noheveriny fa ry zareo ihany no nahazo ny fahasoavan’Andriamanitra. Noheveriny fa tsara noho ny olona hafa izy. Halany i Jesosy satria niteny izany zavatra izany. Inona no saika nataony tamin’i Jesosy, raha fantatrao?...
Hoy ny Baiboly: ‘Noraisiny i Jesosy ary natosiny hivoaka ny tanàna. Nentiny teny an-tampon-tendrombohitra izy ary saika nazerany ho faty tao amin’ny hantsana! Afaka nandositra anefa i Jesosy.’—Lioka 4:16-30.
Nahoana no mitady hamono an’i Jesosy ireto olona ireto?
Raha ianao no tratran’izany, mbola hiverina hiresaka momba an’Andriamanitra amin’izany olona izany ve ianao?... Mila herim-po ny fanaovana izany, sa ahoana?... Mbola niverina tany Nazareta i Jesosy, herintaona tatỳ aoriana. Hoy ny Baiboly: ‘Nanomboka nampianatra azy ireo tao amin’ny synagogany izy.’ Tsy natahotra an’ireo olona tsy tia an’Andriamanitra i Jesosy, ka tsy nitsahatra nilaza ny fahamarinana.—Matio 13:54.
Teo amin’ny toerana nisy lehilahy iray nalemy tanana i Jesosy, indray andro. Sabata io andro io. Nomen’Andriamanitra fahefana hanasitrana an’io lehilahy io izy. Nisy nitady hanakantsakana azy anefa. Inona no nataon’ilay Mpampianatra Lehibe?... Hoy izy aloha: ‘Raha manana ondry latsaka ao anaty lavaka amin’ny Sabata ianareo, hampakatra azy avy ao ve ianareo?’
Hanao izany tokoa ireo olona ireo na dia fotoam-pialan-tsasatra aza ny Sabata. Hoy àry i Jesosy: ‘Aleo manampy olona amin’ny Sabata, satria sarobidy noho ny ondry ny olona!’ Tena nazava fa tokony hanampy an’io lehilahy io i Jesosy ka hanasitrana azy!
Nasainy natsotran’ilay lehilahy àry ny tanany, ka tonga dia sitrana. Faly be ilay lehilahy! Ary ireo lehilahy hafa? Faly ve izy ireo?... Tsia, fa vao mainka aza nankahala an’i Jesosy izy ireo. Lasa nivoaka izy ka nitady tetika hamonoana an’i Jesosy!—Matio 12:9-14.
Toy izany koa amin’izao fotoana izao. Tsy ny olona rehetra mihitsy no ho faly amintsika, na inona na inona ataontsika. Tsy maintsy manapa-kevitra àry isika hoe iza no tena tiantsika ho faly amintsika. Raha i Jehovah Andriamanitra sy Jesosy Kristy Zanany, no tiantsika hampifalina, dia tsy maintsy manao izay ampianariny isika. Iza no hankahala antsika amin’izay? Iza no hanakantsakana antsika tsy hanao ny tsara?...
Satana Devoly. Iza koa?... Ireo olona voafitaky ny Devoly ka mino zavatra diso. Hoy i Jesosy tamin’ny mpitondra fivavahana tamin’ny androny: ‘Ianareo avy amin’ny Devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo hatao.’—Jaona 8:44.
Betsaka ny olona tian’ny Devoly. “Izao tontolo izao” no iantsoan’i Jesosy azy ireny. Iza ilay “izao tontolo izao” resahin’i Jesosy, araka ny hevitrao?... Andeha hojerentsika ny Jaona toko faha-15, andininy faha-19. Hoy i Jesosy ao: ‘Raha naman’izao tontolo izao ianareo, dia ho tia ny azy izao tontolo izao; fa satria tsy naman’izao tontolo izao ianareo, fa Izaho efa nifidy anareo tamin’izao tontolo izao, dia halan’izao tontolo izao ianareo.’
Ny olona rehetra tsy mpianatr’i Jesosy àry no ilay ‘izao tontolo izao’ mankahala ny mpianany. Nahoana izao tontolo izao no mankahala ny mpianatr’i Jesosy?... Eritrereto izao. Iza no mifehy an’izao tontolo izao?... Hoy ny Baiboly: ‘Izao tontolo izao dia mipetraka eo amin’ilay ratsy avokoa.’ I Satana Devoly io ‘ilay ratsy’ io.​—1 Jaona 5:19.
Azonao amin’izay ve hoe nahoana no sarotra ny manao ny tsara?... I Satana sy izao tontolo izao no manasarotra ilay izy. Mbola misy antony hafa ve? Tadidinao ve io antony io?... Hitantsika tao amin’ny Toko 23, fa nahazo ota isika rehetra. Tena hahafinaritra rehefa tsy hisy intsony ny ota sy ny Devoly ary izao tontolo izao, sa ahoana?...
Mandalo izao tontolo izao, nefa hanao ahoana ireo manao ny tsara?
Hoy ny Baiboly: “Mandalo izao fiainana izao.” Midika izany fa ho ringana ireo tsy mpianatr’ilay Mpampianatra Lehibe. Tsy havela hiaina mandrakizay izy ireo. Iza no hiaina mandrakizay?... Hoy koa ny Baiboly: “Izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay.” (1 Jaona 2:17) Ireo manao ny tsara, na manao “ny sitrapon’Andriamanitra”, ihany no hiaina mandrakizay ao amin’ny tontolo vaovaon’Andriamanitra. Maniry hanao ny tsara àry isika na dia sarotra aza izany, sa ahoana?...
Andeha hiarahantsika mamaky ireto andininy ireto, fa mampiseho hoe nahoana no tsy mora ny manao ny tsara: Matio 7:13, 14; Lioka 13:23, 24; Asan’ny Apostoly 14:21, 22.
Te Hanampy Antsika i Jehovah
Ataovy ireto kilalao ireto mba hampianarana ny zanakao hoe tena afaka manampy azy i Jehovah. Hiantehitra aminy foana ny zanakao amin’izay.
Hizara Hizara Nahoana no Sarotra ny Manao ny Tsara?
Hirao Ilay Hira Momba ny Herim-po